Zviratidzo zvekutsvaga kwekufananidzira - Zviratidzo zvekutsvaga kwekutengesa neFxPremiere
RARIRA FX SIGNALS
TENGA ZVIMWE ZVINOKWADI
TARISA PASOX ACCOUNT
ZUVA ROSE ZVINOKUDZIDZAvhura nhoroondo ye forex
Kutengeserana Kwekufananidzira Zviratidzo zvinoshanda
Zviratidzo zveExperx neFxPremiere
1. Zuva Nezuva Zvose Zviratidzo Zvepakitiji
Sarudza kubva pazviratidzo zvedu zveExx Signals. Kunyangwe iwe uri mutengesi anotanga kana iwe wakanga uchitengesa kwechinguva chiduku, zvatinosarudza zvepateri zvinoshandiswa kumatunhu ose evatengesi.
2. Pedzisa yako sarudza kutenga
Uchishandisa nzira dzedu dzekubhadhara dzakachengeteka, ingopfuurira ne Payment Options. Tinogamuchira Credit Card, Debit Card, Skrill, Neteller uye Mamwe Makadhi akadai saMaestro.
3. Tarisai email yako yakagamuchirwa
Kana tangove tapiwa mubhadharo wako, munguva pfupi iwe uchakurumidza kuwana email yedu yekugamuchira. Kupindura kune chikumbiro chedu chema email, ipapo iwe wakagadzirira kuenda.
4. Vhura Aunti Yakafanofanirwa neMutengi Akarongedzerwa
Vhura Account Yakafanirwa kubva pawebsite yedu. Kana kuti shandisa iwe pachako mutengesi. Nhamba dzedu dzepamberi dzekutengeserana dzinoshandiswa pane chero upi nepo Forex platform.
Nezvese dzedu TOP FX Signals
Kutumira Zviratidzo Zvokufambisa kubvira 2010
Zuva reZvirevo zveZvirevo
Zviratidzo zvekutsvaga kwekufananidzira neFxPremiere Group. Kufukidza EUR / USD, USD / CHF, EUR / CHF, USD / CAD, USD / JPY, GBP / USD, EUR / GBP, AUD / USD, CHF / JPY, AUD / JPY, EUR / JPY, NZD / JPY, GBP / JPY, NZD / USD, GOLD, KUNYANYA OIL. Kutengesa misika yemari yekunze kwekunze ndeyekugadzira purogiramu yakazara nekuderedza kuwanda kwekurasikirwa - kusundira miganhu yevanokunda vanomhanya. NeFxPremiere iwe unogona kushandisa zvakanakisisa mazano edu eFX ekutengeserana mashandisirwo emagetsi, kutarisira dambudziko rako uye kuchengetedza bhizimusi rako kutsika-pasi pasi nguva dzose. Nzvimbo dzedu dzokutanga dzekutengeserana dzinopa nguva yeramangwana inotaridzika inononoka mberi zvakanaka. Uchishandisa FxPremiere Fx Signals muKutengesa uchawana zvikwangwani zvepamusoro zvezuva nezuva!
+ Makore e50 MASHANDI MUMAPITITAL FX MARKETS
MASTER FOREX KUCHENGA MASHOKO ACHOKWADI 2018
Zuva reNhasi Forex Whatsapp neTeregram Signals
Zviratidzo Zvokutengeserana Kwekufananidzira Mazano Ekudzidza
Nzira Yokutengesa Nayo Forex
Nhanho 1: Kunzwisisa Ma Market Forex Maitiro Ekutengeserana Forex - Kunyatsonzwisisa zvakanyanya-kushandiswa kare kushandiswa kutsva kuchaita kuti kupinda kwako mumusika kuve nyore. Mamwe mashoko nemitsara yaunonzwa kazhinji nekusanganisira: Shandisa mari yekutanga: Mari yawakabata. Kana iwe uri weUnited States, mari yako yepasi[...]
Forex - Dollar Flat seSlump muSterling Limits madonhe
FxPremere.com Forex - Flat Dollar seSlump muSterling Limits madonhe - FxPremiere.com - Dhora reUnited States rakapesana nevanopikisana neMuvhuro sekuti kubble mu sterling yakabatsira kubvisa kurasikirwa uye deta ichiratidza musha wekuAmerica wakaramba uchinge uchinge uchinge wakagadzikana. Iko US dollar index, iyo inotarisa greenback nebhasikiti rakakosha-yezvokutengeserana yezvitanhatu[...]
Chii Chinonzi Liquidity?
Kudyidzana kunoreva kushanda kwemisika. Inogadziriswa nevatengesi vangani vatengesa kutengesa uye iyo yose yekutengesa ivo vari kutengesa mu forex. Chikonzero chimwe chekuti mutengesi wekunze kune imwe nyika ndeyekuti mvura inodhaka nokuti inotengesa maawa 24 pazuva pazuva revhiki. Ichowo musika wakadzika kwazvo, uye inenge[...]
Forex - Sterling Drifts Muduku Sekugadzirira May 3rd Brexit Kuvhota
FxPremiere.com - Chirungu cheBritain chiri kukurira pasi nemadhora uye euro kutanga kweChishanu muEurope, kuunganidza mavhesi evhiki ino sezvo mutengesi unotora misi yemasikati mashoma mu Brexit. Prime Prime Minister Ms Theresa May ari kugadzirira kubvunza vateereri vemitemo kuti vhote paKurambidzwa kweKurambidzwa kwekuregererwa neEU[...]
Nhanho dzokutanga munyika ye Forex
Matanho ekutanga munyika ye Forex - Heino mutevedzeri wevatengesi vekutanga vekambani ye Forex. Muenzaniso wevatengesi vatengesi wakagadzirirwa nevatengesi vezvese vekambani yeFxPremiere vane ruzivo rwakawanda rwakabatsira kugadzirisa maitiro aro uye zviri mukati. Kana iwe usingazivi nemashoko uye hauna[...]
Zvikonzero nei Kutengeserana KwekuIndaneti Kwave Kuve Kwakakurumbira
Nekutengeserana kwepaIndaneti, iwe unobvisa chero mukana wekutarisana nemunhu anokakavimbika kana anokanganisa iwe unoshanda kuti abatsirwe zvaanofarira pamutengo wekutsvaga kwako. Kutengeserana kwepaIndaneti kwakava izwi mumhuri dzose kumativi ose enyika. Inoramba ichiwedzera pakuzivikanwa uye kunyanya pakati pevaduku. Online trading[...]
Forex - Sterling Tanks pa Brexit Legal Advice
Forex - Sterling Tanks pa Brexit Legal AdviceFxPremiere.com - IBritish Pound yakapindurwa kubudirira kwekutanga musi weChishanu, kuwira kune yakadzika mashoma ezuva semazano epamutemo pa Brexit yakaratidza kuti dambudziko repamutemo kuti UK ingabatwa. GBP / USD yakanga iri pasi 1.03% kusvika 1.3014 ne07: 30 AM ET (11: 30 GMT), mushure mekunge[...]
Forex - US Dollar madonhwe
FxPremiere.com - Forex - US Dollar matonsi Greenback yakadzika musi weChishanu mushure mekunge data yakaratidza hupfumi hweUnited States huri kuwedzera 20k mabasa muna Feb 2019, zvakanyanya pasi pekutarisira, sezvo hupfumi hune basa rakakwana. Nhamba idzi dzinomirira mifananidzo yakavhenganiswa yehutano muhupfumi hweUnited States, sezvo uwandu hwemabasa husina kumira. The US[...]
EUR / USD Technical Analysis: Euro Drops Trending - EUR / USD NZIRA DZOKUTAURIRA: BEARISH Tepid Euro yakagadziriswa mashizha pakurwisana naJan 2018 Pfupi-nguva yekutsvaga mamiriro ekutsvaga kushanduka kwekutsvaga kunogona kunge kunoputira Vashambadzi vangawana kutsvaga kwekuvhiringidza I Euro inodzokorora kurwisa kutsanangura downtrend vs US Dollar kubvira Jan 2018 zvakare. Kuonekwa kwechigadziko cheShooting Star pa[...]
Dzidza Nguva Yokutanga Kutengesa
Chikoro chePips Chigamuchirwa! Iwe uri mutsva wekutengesa forex? Chikoro chePips ndiyo yemhando yedu yekombiki yepamusoro inobatsira vanotanga kudzidza kudzidza kutengesa fx. Kana iwe wakagara uchida kudzidza kudzidzira asi usingazivi kuti unotanga kupi, saka iyi yedzidzo ndeyako. Chii Chinonzi Forex? Dzidza pamusoro peizvi massively[...]
Forex - Early PMIs Simudza Euro Mushure mekufungisisa Fed Minutes
FxPremiere.com - Yuro yakashandura zvakanyanya vs US dollar mukutanga kutengeserana muEurope China, sezvo mutengi wekutenga indices kubva kuFrance neGermany akacherechedza kuti hupfumi hweEuro-nzvimbo hunogona kunge huchikurumidza kubuda kunze kwekuderera kwaro kumagumo e2018. Pana 03: 30 AM ET, euro yaiva pa $ 1.1358, iri pasi pevhiki mbiri[...]
Dhidhiro Yakagadzirwa na SEO Experteer